အသက် ၁၇ - HOCD & porn-induced ED၊ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
04ဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၂ ရက် - ၂၉ - PMO အခမဲ့ (ရက်ပေါင်း ၈၂ ရက်) YBOP ကိုဖတ်တဲ့အခါငါမှာဒီပြproblemနာရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ Porn-induced ED နဲ့ HOCD ရှိတယ်။ ဒါကခွေးဖြစ်ပါတယ် ငါ Tho သို့လည်းမရလိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီး ၁၀ နှစ်အရွယ်ကတည်းကအဆက်မပြတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်။ တစ်နေ့တာမှာအနည်းဆုံး ၂-၅ ကြိမ်လောက်လုပ်လိမ့်မယ်။ ငါမလိုအပ်ဘဲအားလပ်ချိန်ယူခဲသည်။ ငါကနေ့ ၃၉ ရောက်နေတယ်။
8 ကြိမ်အကြောင်းကို MO ကို: dammit / ဘုရား။ ကောင်းသောသတင်းငါတစ်နေ့ 20 န်းကျင်ဘဝမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်သည်။
ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကျွန်မရဲ့ libido အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ပါ။ ငါကိုလိင်ဆွဲဆောင်တဲ့သူကိုကြည့်ရတာ HOCD ကိုငါတကယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါအမျိုးသမီးများနှင့်အတူရှိသင့်သောယုံကြည်မှုရရှိရန်။
LINK - သူ၏ဘလော့ - ပျောက်ဆုံးနေသောကလေးငယ် (နေ့ ၂၉ PMO အခမဲ့) ရက်ပေါင်း ၈၅ လုံး
BY - သီလရှင်
နေ့ 41- သူငယ်ချင်းအချို့နှင့်အတူနံနက်စိုက်ခင်းများရရှိခြင်းနှင့်ဤမိန်းကလေးကခုန်ခြင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ခြင်း။ သူမကိုကြည့်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ခံစားချက်မြင့်မားသည်။ အဲဒီမှာတစ်ခုခုခံစားခဲ့ရပေမယ့်နီးပါးဘာမျှမ။
အချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်, ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာတစ်ဂျာနယ် Keeping ။
နေ့ 44- ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ libido ဟာချိုသာပေမယ့်သေဆုံးသွားတဲ့ဒစ်ဖ်စတာကိုကျော်လွန်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား) ကျွန်ုပ်စတင်တွေ့ရှိသောတိုးတက်မှုအသစ်များကကျွန်ုပ်သည်“ မိန်းကလေးများမှကြည့်ရှုခြင်း” ကိုရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်။ ငါ HOCD နှင့်အတူဖြတ်သန်းခဲ့ရသမျှအရာအားလုံးနှင့်အတူငါ့ကိုပဲပျော်ရွှင်စေသည်။ ငါသတိထားမိသည့်နောက်အချက်မှာအမျိုးသမီးများ၏အသွင်အပြင်ကိုအလင်းရောင်အသစ်ဖြင့်သတိပြုမိခြင်းဖြစ်သည်။ Kinda ကမိန်းကလေးအချို့ကိုထွန်းလင်းစေခဲ့သည်။ အိုးဒါငါစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ tits ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။ ကောင်းပြီ ... ပြီးတော့ပြီးတော့ငါနေ့စဉ်မိန်းကလေးတွေကိုစဉ်းစားရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်မခိုင်မာပါ။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုတော်တော်လေး reboot လုပ်မထားဘူးလို့ထင်စေတယ်။ ငါလည်းဒီဂဏန်းတွေကိုမထည့်ချင်ဘူး။ ငါပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရစေတယ်။ (OCD)
ထိုအခါငါ Facebook ပေါ်မှာရှိ၏နှင့် tits များအတွက်စာမျက်နှာကိုမြင်တော်မူ၏။ ပုံကို နှိပ်၍ မကြည့်နိုင်ပါ။ သူတို့ကငါ့ကိုလှည့်။ ထိုအခါမူကားငါ "ညာဘက်" တ ဦး တည်းကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေဓာတ်ပုံများကိုမှတဆင့် scrolling ခဲ့သည်။ ငါလျောက်ပတ်စွာဝေးတယ်ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိသည်။ အခုကြည့်လိုက်တော့ငါဟာ porn နဲ့အမြဲတမ်းဒါကိုအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်ကမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်စာမျက်နှာ ၁၆ မျက်နှာကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော 16 နှစ်က! ဒါကရှုပ်ထွေးနေပါတယ် အတော်လေးရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာတစ်နေ့ကို ၃-၅ ကြိမ်လောက် porn အကြောင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့ PS ငါနာရီကိုပြန်လည်ချိန်ညှိသင့်သည်ဟုမထင်ပါ။
အဘယ်အရာကိုအခြားအဘယ်အရာကို Hmm ။ ကျွန်တော့်ဝမ်းကွဲကကျွန်တော်ရူးသွပ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ၄၄ ရက်ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့တူတော့မယ့်တစ်နေ့တာမှာမစဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ! ငါအခုအချိန်မှာပျော်နေတယ်၊ ​​ငါနည်းနည်းပိုကောင်းနိုင်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ၄၅ ရက်လုံးလုံးစိတ်ထဲမှာမှုတ်နေပြီ။ မစောင့်နိုင်🙂
နေ့ 48- ဝမ်းနည်း ငါမကြာသေးမီကငါ့အကြောက်စိတ်ကျော်ရပြီ။ ငါ့ကိုအများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပေးသောသူများ။ ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားများနှင့်စကားပြောရန်၊ ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကယောက်ျားတွေကိုလိင်ကိစ္စဆွဲဆောင်တာကိုငါကြောက်နေတုန်းပဲ။ ငါယောက်ျားကနေစိုက်ထူတယ်ဘယ်တော့မှပေမယ့်ငါ့ကိုနေဆဲနှောင့်အယှက်။ ငါဟာတကယ့်ကိုပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပါဘဲ၊ ငါဟာချိုချိုသာသာနဲ့တူတဲ့ခံစားမှုမျိုးရတယ်။ ယောက်ျားနှင့်အမှန်တကယ်ကြိုးစားသောအခါအနည်းငယ်တက်လာသည်။ သို့သော်ငါစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် "ကြိုးစားနေသည့်ခံစားမှု" ကိုမျှမကြိုးစားခဲ့သကဲ့သို့အတူတူပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါမသိရပါဘူး ငါမိန်းမတို့ထက်ယောက်ျားနှင့်အတူလမ်းပိုမိုကြိုးစားပါ။ ယောက်ျားနှင့်အတူအဆက်မပြတ်လိုပဲ။ ငါမိန်းမများနှင့်အတူကြိုးစားရန်စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပြောတာကသူတို့ကိုငါနဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။ သူတို့ကိုချီးမွမ်းပေးခြင်းနှင့်ပြောခြင်းကဲ့သို့သော။ ဒါကတိုးတက်မှုတစ်ခု ငါအရမ်းနှမြောတယ် (အရမ်းရယ်ရတယ်) အရမ်းကြိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့်အဲဒီမှာဖြစ်ပျက်သတိပြုမိသောဤမိန်းကလေးနှင့်အတူငါနှေးကွေး။ ထို့နောက်ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်ဤချစ်စရာမိန်းကလေးသည်အနီးကပ်လာပြီးကျွန်တော့်နားတွင်စကားပြောနေသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ထိုတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ရလာသည်။
နေ့ 49- ဒီတော့ HOCD နဲ့ငါ့ရဲ့စိတ်ဟာယောက်ျားတွေအပေါ်မှာအမြဲစွဲမြဲနေတယ်။ ငါတုန့်ပြန်မှုရလားယောက်ျားတွေအကြောင်းစာသားအတိုင်းစိတ်ကူးယဉ်နေတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီငါ .. (ကြောက်တယ်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကြောက်လန့်) နှင့်ငါကဒီ horny / tingly အဲဒီမှာဆင်းခံစားရှိခြင်းခဲ့နည်းလမ်းတွေပေမယ့်ငါများသောအားဖြင့်ယောက်ျားမဖြစ်မနေအဖြစ်ကစမ်းသပ်လိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါကစဉ်းစားနဲ့တူတယ် ... ဟေ့အဘယ်ကြောင့်ငါအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းစဉ်းစားရန်မကြိုးစားသလဲ ဒါနဲ့ငါလုပ်ခဲ့တယ်ငါစိုက်ထူတယ်! ငါယောက်ျားမှစိုက်ထူဖူးဘူးဆိုပါစို့။ ၅-၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးနိုင်သည်။ သို့သော်မည်သူမဆို HOCD အကြောင်းမည်သူမဆိုသိလျှင်၎င်းသည်အစာအိမ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်လာသည်။
နေ့ 54- စိုစွတ်နေသောအိပ်မက်ကိုနှိုးလိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဒုတိယ၊ တတိယမြောက်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခု kinda ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တကယ်ပဲအမှတ်အသားတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်နိုင်မလား။ ငါမသိဘူး။ ငါမကြာသေးမီက horny ခံစားနေရတယ်ဒါပေမယ့်ငါ reboot နှင့်အတူဖြတ်သန်းသွားနေတုန်းပဲ။
yeah HOCD အမှန်တကယ်ခွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်သင်၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူ messes ။
နေ့ 56- ငါတကယ်ယောက်ျားတွေတက် fucked ။ ငါ porn နှစ်ခုရက်ပေါင်းကဲ့သို့အချို့သောကြည့် watched ။ ငါ MO'd ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုကငါ့ကို craigslist ကြော်ငြာ၏စိတ်ကူးကိုပေး၏။ ကောင်းပြီ၊ ငါလုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုအားလုံးကယိုစီးကျသွားသလိုမျိုးအဲဒီမှာလုံးဝသေပြီလို့ခံစားရတယ်။ ငါကအပြည့်အဝအပြစ်တင်ယူပေမယ့်ငါ့ ဦး ခေါင်းကိုတက်စောင့်ရှောက်တယ်။
နေ့ 57- ကောင်းပြီငါမိန်းမတွေအားလုံးအတွက်ချိုချိုခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့မပြောနိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့ဘဝရဲ့အရိပ်လက္ခဏာတွေကိုငါသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ငါဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါ့အတွက်ဖြစ်နိုင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုပြတာပဲ။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောဆန္ဒမှာကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ပါ။
ငါအလေးအနက်ထားတနေ့လုံးအတွေးများရှိသည်။ ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းလာပြီ
နေ့ 60- ဒီနေ့ကျောင်းပထမနေ့ပါ ငါမိန်းမတို့နှင့်အတူအမှန်တကယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ YBOP ကဒါကိုကူညီပေးတာဝမ်းသာပါတယ် ဒီမိန်းကလေးကကျွန်တော့်ကိုအတန်းတစ်ခုမှာဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ သူမပေါင်ကိုတို့ထိလိုက်တာကအစပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ငရဲ” လို့စဉ်းစားနေတုန်းသူမကလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတစ်စက္ကန့်အကြာမှာငါ့ကိုကြည့်ပြီးရယ်မောရွှင်လန်းစွာစတင်ခဲ့သည်။ ငါသူမလည်း 8 ဖွင့်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ငါရိုးသားဖို့အကြီးအခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါအလေ့အကျင့်မှာငါတဟုန်ထိုးမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ငါဒီအချိန်မှာယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေမဟုတ်ဘူး။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်မိန်းကလေးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်: / ။ သို့သော်၎င်းသည်တိုးတက်မှုကိုပြသသည်။ အခုငါထင်နေသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည်။ ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်မယ်ထင်တာကိုစိတ်ပျက်စေတယ် ။(
ငါလည်းဒီနေ့နေမကောင်းဖြစ်လာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာအဖျားရှိတယ်။ တချို့လူတွေရဲ့ reboots တွေမှာကျွန်တော်ဒီကိုရတယ်။ ငါဟာဘယ်တော့မှမဖျားနာဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်ငါအံ့သြမှာမဟုတ်ဘူး။
နေ့ 63- အတန်းထဲတွင်ဤမိန်းကလေးတ ဦး အားဖြင့်ဖွင့်။ ငါသူမအားပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါကအခြားမိန်းကလေးတွေလိုအများအားဖြင့်တော့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ငါကသူနဲ့ပါ။ ဟမ်လား သူမမှာ BF ရှိနေတာအရမ်းဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကငါကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အများကြီးပြသနေသေးတယ်။
နေ့ 70- ကောင်းပြီဒီနေ့ငါ့နောက်ဆုံး mo ပြန်လာကတည်းက 15 ရက်မှတ်သား။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာဒုတိယအိပ်မက်ထပ်မက်ခဲ့တယ်။ ငါမှာ HOCD မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကမကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့်ငါအသက်ရှင်နေတဲ့သေခြင်းဆိုတာငါခံစားနေရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ငါနောက်ဆုံးညကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်စူပါ extroverted မိပါတယ်။ ကျွန်တော့် abs ကရယ်မောခြင်းကနေစတင်နာကျင်လာတယ်။ ထိုအခါငါတစ်ချိန်တည်းမှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်အပေါ်ရိုက်စတင်ခဲ့သည်။ Kinda နောက်ကျောနှင့်ထွက်သွား။ ငါမိန်းမတို့အားရံဖန်ရံခါဆွဲဆောင်မှုရကြဘူး
နေ့ 80- ငါအမြဲတမ်းဒီနေရာမှာမရှိခဲ့ဘူးနဲ့တူခံစား! ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၈၀ တွင်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကြောင်းမယုံနိုင်ပါ။ ငါလိမ်ပြောနေသလိုမျိုးခံစားရတယ် .. ငါ MO'd ခဏခဏဖြစ်ပေမယ့်အချိန်ကိုပြန်စနိုင်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ငါ PMO မရှိတဲ့ ၂၄ ရက်မှာတကယ်ပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူတယ်၊ ဒီ ၂၄ ရက်တာကာလအတွင်းမှာငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်နှစ်ခုရှိသည်။ အဲဒီ ၂ ခုနဲ့နောက် ၁ ခုအပါအ ၀ င်ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိုစွတ်သောအိပ်မက် (၃) ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ ') အားလုံး YBOP ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏မူလရက်အရေအတွက်မှာ ၉၀ ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကြာရှည်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ငါ 80% ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး ငါ့အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုသည်ငါနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ကျပန်းမုန်းတီးခြင်းများမဟုတ်ပါ ။(
17 နှစ်အရွယ်။ 100 ရက်ပေါင်းပေါင်း
အောက်တိုဘာလ 5, 2012